आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ ? नम्बर कसरी थाह पाउने कलफरवार्ड कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस सबै जानकारी – Life Nepali
आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ ? नम्बर कसरी थाह पाउने कलफरवार्ड कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस सबै जानकारी
काठमाडौँ । मोबाइलको ब्यालेन्स थाहा पाउन *400# डायल गर्नुहोस । आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउन *9# डायल गर्नुहोस । आफ्नो मोबाइल नम्बर कस्को नाममा छ थाहा पाउन *922# डायल गर्नुहोस । (आफ्नो नाममा दर्ता भएको मोबाईल नम्बर मात्र प्रयोग गर्नुहोला) कल फरवार्ड गर्न **21*98xxxxxxxx (फरवार्ड गर्न चाहेको नं.)# डायल गर्नुहोस ।****थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ****
कल फरवार्ड Cancel गर्न ##002# डायल गर्नुहोस। Call Waiting सेवा सुचारु गर्न *43# डायल गर्नुहोस ।
Call Waiting सेवा Cancel गर्न #43# डायल गर्नुहोस। मोबाइलमा Friends and Family (FNF) सेवा सुरु गर्न पहिलो पटक FNFSUB*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस र अन्य ४ वटा नम्बर थप गर्न FNFADD*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
आफ्नो मोबाइल नम्बरको Security Code प्राप्त गर्न SCODE लेखेर र PUK Code प्राप्त गर्न PUK लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस।पोस्टपेड मोबाइलमा ISD सुबिधा थप्न #331*0000# डायल गर्नुहोस र सुबिधा हटाउन *331*0000# डायल गर्नुहोस । डाटा प्याक तथा भ्वाइस प्याक सम्बन्धि नयाँ Offer थाहा पाउन *1415# डायल गर्नुहोस । Data Pack खरिद गर्न *1415*1# डायल गर्नुहोस र Voice Pack खरिद गर्न *1415*4# डायल गर्नुहोस ।
बाँकी डाटा र भ्वाइस प्याक थाहा पाउन *1415*5# डायल गर्नुहोस । मोबाइलमा CRBT राख्न *1455# डायल गर्नुहोस र प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्नुहोस अथवा CRBT Code छ भने SUB स्पेस CRBT Code लेखेर 1455 मा SMS गर्नुहोस । मोबाइलमा CRBT हटाउन UNSUB लेखेर 1455 मा SMS गर्नुहोस अथवा *1455# डायल गर्ने * लेखेर पठाउने, अनि 8 लेखेर पठाउने अनि अन्तमा सुनिश्चित गर्न 1 लेखेर पठाउनुस।
Missed Call Alert (MCA) सेवा बन्द गर्न unsub mca लेखेर १४०० मा SMS गर्नुहोस । ल्याण्डलाइन टेलिफोनको तिर्नुपर्ने बिल रकम थाहा पाउन CB*065XXXXXX (पुरा टे.न.)लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस Due Amount भनेको तिर्नुपर्ने रकम हो Available Credit भनेको फोन गर्न मिल्ने बाँकी रकम हो।
NCELL /एनसेल :- एनसेलका लागि आफ्नो सिम कडा कसको नाममा दर्ता छ ? जानकारी पाउन – मात्र *9966# डायल गरी आफूले प्रयोग गरिरहेकाे मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ थाहा पाउन सकिन्छ ।
Previous नेपालीको लागी खुशीको खबर चीनमा रहेका कुनै नेपालीमा पनि कोरोना भा’इरस देखिएन”
Next कैलालीमा ग’र्भवती श्रीमतीको को’शेली लिन श्रीमान जान थाले